Izindawo eziyi-8 emhlabeni ezinqatshelwe kwabesifazane | Izindaba Zokuhamba
Izindawo eziyi-8 emhlabeni ezingavunyelwe kwabesifazane
Maria | | General, Izaziso
Kuwo wonke umlando, ngeshwa abesifazane baye babandlululwa ngenxa yobulili babo futhi yize kunentuthuko eningi eyenziwe ngokulingana emhlabeni, njengamanje kunezindawo eziningana lapho abesifazane benqatshelwe ukuvakasha ngenxa yenkolo yabo noma inkolo yabo. ezemidlalo, phakathi kwezinye izizathu. Kunzima ukukholelwa kodwa kuliqiniso.
Eposini elilandelayo sizovakashela ezinye zalezo zindawo lapho nanamuhla abesifazane bengamukelekile futhi kumele bahlale kude ukuze bangaphazamisi abantu besithathu noma impilo yabo.
1 IHaji Ali Dargah Shrine eNdiya
2 INtaba i-Omine eJapan
3 IGalaxy Water Park eJalimane
4 IMount Athos eGrisi
5 Amakilabhu amaGentlemen e-Italy
6 I-Arabia saudí
7 ITe Museum Museum eNew Zealand
8 Ibhishi iMlimadji eComoros Islands
IHaji Ali Dargah Shrine eNdiya
IHaji Ali Dargah Mosque ingenye yezindawo ezingokomfanekiso eBombay futhi iheha izinkulungwane zezivakashi masonto onke, kepha abesifazane abavunyelwe ukungena emathuneni ngabesifazane njengoba kubhekwa njengesono esikhulu. Eqinisweni, kunezibonakaliso ezivimbela ngokusobala ukungena kwabantu besifazane.
Kusukela ngo-2011, isisekelo esilawula indawo engcwele siye sabavimbela ukungena kule mosque evame ukuhanjelwa amaSulumane, amaHindu kanye nabavakashi. Esinye sezizathu esinikezwe ukuvimbela ukudlula kwabo ukuthi bangaba sezinsukwini zokuya esikhathini, impikiswano ejwayelekile emlonyeni wenkolo elondolozayo yokuvimbela ukungena ezindaweni ezingcwele.
IHaji Ali Dargah Mosque isesiqhingini esifinyeleleka kumaza amancane. Yakhiwa ngo-1431 ukukhumbula umthengisi ocebile owashiya impahla yakhe waya ohambweni oluya eMecca.
INtaba i-Omine eJapan
Ngo-2004 iNtaba i-Omine yamenyezelwa njenge-UNESCO njengeGugu Lomhlaba kodwa ukufinyelela kwayo kuvunyelwe nakwabesifazane. Isizathu ukuthi ubuhle bayo bungaphazamisa abantu abahamba ngezinyawo endleleni yabo yokuzincisha nokuzindla okujulile.
Ithempeli elingenhla kwentaba yindlunkulu yabakwaSugendo abathembekile bobuBuddha baseJapan. Ngesikhathi sika-Heian (795-1185), umzila wokuhambela amaShugendo waduma kakhulu futhi, ngokusho kwenganekwane, ama-pilgrim aphula imithetho noma abonisa ukukholwa okuncane alengiswa ngamaqakala eweni.
Abesifazane bebenqatshelwe ukufinyelela yonke indlela yokuhambela kuze kube ngawo-70 futhi kusenezindawo zomgwaqo lapho abesifazane bengakwazi ukunyathela khona.
Sekuyisikhathi eside kwenziwa imizamo yokulwa nalokhu kuvinjelwa, kodwa kwanhlanga zimuka nomoya. Abasekeli bathi kuyisiko leminyaka eli-1.300 ubudala futhi bathi ukwehlukaniswa ngokocansi akufani nokucwaswa. Kodwa-ke, ukuqanjwa kwe-Unesco ngeNtaba i-Omine njengeGugu Lomhlaba kwabonwa ngabagxeki njengokuvuma komhlaba wonke kwalokhu kuvinjelwa.
IGalaxy Water Park eJalimane
IJalimane yicala lokufuna ukwazi. Leli paki lamanzi lingelinye elikhulu kunawo wonke eYurophu futhi livimbele abesifazane ekuheheni kwabo okuyinhloko: i-X-Treme Faser slide. Isizathu ukuthi lapho ushibilika phansi, kufinyelelwa isivinini esingaphezulu kuka-100 km / h kanti abesifazane abaningana babike ukuthi bathola ukungaphatheki kahle esithweni sabo sangasese ngemuva kokuqeda ukusetshenziswa kwaso. Kuyamangalisa kodwa kuyiqiniso.
IMount Athos eGrisi
Emuva ngekhulu le-XNUMX, umbusi waseByzantium wenqabela abesifazane ukungena endaweni engcwele yeNtaba i-Athos ukuze bangalingi izindela ezihlala lapho. Kwesinye sezinhlonhlo ezintathu ezakha iChalkidiki yile ntaba lapho izindela zama-Orthodox zaseRussia zihlala khona cishe iminyaka eyinkulungwane.
Le ndawo yamenyezelwa njenge-Unesco njengeGugu Lomhlaba ngo-1998 kodwa ezivakashi ezingama-40.000 eziyitholayo ngonyaka, akekho noyedwa kwabesifazane ngoba kumele bahlale okungenani amamitha angama-500 ukusuka kule ndawo. Abakwazi nokufinyelela ngemvume ekhethekile okufanele icelwe kusengaphambili ukubona i-Mount Athos.
Kepha akupheleli lapho, ngokomthetho wakudala, izilwane zesifazane nazo azikwazi ukunyathela enhlabathini yazo. Okuwukuphela kokuhlukile amakati, ngoba awusizo kwizindela zokuzingela amagundane.
Amakilabhu amaGentlemen e-Italy
Kuleli lizwe lase-Europe kulinganiselwa ukuthi kunamakilabhu angaba ngu-40 lapho osopolitiki, ososomabhizinisi kanye nosomabhizinisi behlangana khona bezodingida ezamabhizinisi nezomnotho. Kodwa-ke, abesifazane abavunyelwe ukuhlanganyela ezingxoxweni zabo ngoba abavunyelwe ukungena.
Okuthile okufanayo kuyenzeka naseBasque Country nasemiphakathini ye-gastronomic nakwenye i-kafenion yeziqhingi zaseGrisi. Abesifazane abavunyelwe kulezi zithilomu zendabuko futhi bavame ukugcwala amadoda adlala amakhadi noma akhulume.
Kuleli cishe zonke izindawo zomphakathi azivunyelwe kwabesifazane ngaphandle kokuthi zihamba nowesilisa. Silula futhi siyaphazamisa.
ITe Museum Museum eNew Zealand
Emahholo eTe Papa Hall Museum, uhambo ngomlando waseNew Zealand lwenziwa ngezinto ezingaphezu kwezingu-25.000, phakathi kwazo okugqame inani elikhulu lezingubo nezithombe.
Kulokhu, kubonakala sengathi ukwenqatshelwa ukungena kwabesifazane akuyona yonke, kepha kwabesifazane abakhulelwe noma labo abaphethe umthetho. Ngokusobala, ngokwezinkolelo zezinye izinkolo ezenziwa endaweni, abesifazane babhekwa "njengabangcolile" ngalezo zinsuku. Manje, umnyuziyamu uzohlola kanjani ukuthi iziphi izivakashi ezisesikhathini?
Ibhishi iMlimadji eComoros Islands
Leli bhishi liseziQhingini zaseComoros futhi yize noma ngubani angafinyelela kule ndawo, kubonakala sengathi ezikhathini zakamuva iziphathimandla zivimbele ukungena kwabantu besifazane ngenxa yengcindezi etholwa abanye babaholi benkolo kule ndawo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » General » Izindawo eziyi-8 emhlabeni ezingavunyelwe kwabesifazane